mercredi, 17 avril 2019 10:23
Diplaoma hosoka: Olona roa naiditra ao amin’ny fonjan’i Marofoto - Mahajanga
Olona roa no fantatra fa naiditra am-ponja vonjimaika ao amin’ny fonjan’i Marofoto ao Mahajanga ny 10 aprily 2019 lasa teo, noho ny raharaha fanaovana sy fampiasana diplaoma hosoka, ka tompon’andraikitra iray avy ao amin’ny sampandraharahan’ny jono ao Boeny sy tompon’andraikitra iray avy ao amin’ny Oniversiten’i Mahajanga no voakasik’izany.
Ny fanadihadiana izay nataon’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly na BIANCO avy ao Mahajanga no nahafantarana ny fisian’io diplaoma sandoka io mba hamenoana ireo antonta-taratasy ilaina hanaovana "reclassement" eo amin’ny asam-panjakana.
Rehefa nojerena akaiky ity raharaha ity dia ilay tompon’andraikitra avy ao amin’ny sampandraharahan’ny jono no nanao fangatahana "reclassement" eny amin’ny Ministera voakasik’izany mba ahafahany miakatra amin’ny sokajy ambonimbony kokoa na "catégorie". Mazava ho azy fa mitaky diplaoma ambony noho ny teo amin’ny sokajy teo aloha izany ankoatr’ireo fepetra hafa takiana.
mercredi, 17 avril 2019 10:14
Toamasina : Vary simba 458 taonina tra-tehaka saika hamidy
Avy any SAVA nalefa teto Toamasina ny 430 taonina. Nisy nampandre ny fisian'izany ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ary ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, ka sarona teto Toamasina ireo vary ireo.
Nisy 28 taonina hafa ihany koa tra-tehaka talohan'io tamina toerana hafa teto Toamasina ihany.
Nisy lafarinina efa tsy fihinana milanja 52 taonina ihany koa sarona nandritra ny fisavana nataon'ny tompon'andraikitry ny ministera taorian'ny loharanom-baovao azon'izy ireo.
Efa nahazoana "certificat de non consommabilité", manamarina fa tsy azo hanina ireo entana ireo.
mercredi, 17 avril 2019 09:47
Pasipaoro hosoka: Olona telo voasambotra
Mpiasan'ny Kaominina Andranomanelatra ny roa, vehivavy nikasa hiasa any ivelany kosa ny fahatelo voasambotra. Iretsy voalohany nanao taratasy nampiasain'ity farany hanaovana pasipaoro hivoaka an’i Madagasikara ny 08 aprily 2019 lasa teo.